Imibuzo evame ukubuzwa - Huizhou Aimsea Newway Technology Co., Ltd.
Kungani usebenzisa i-PVC heat stabilizer?
I-PVC ekushiseni okungezwe kuma-degree angaba ngu-140, yini engeke yengeze icala lokubola, kepha ngalesi sikhathi i-PVC ayikwazi ukufakwa ipulasitiki, ayikwazi ukucutshungulwa, ngakho-ke ukuze ikhiqize imikhiqizo ye-PVC, kufanele ingeze izinga lokushisa eliphakeme, Bese kufanele ujoyine isiqinisi ukuze wenze i-PVC ingonakali, ukuze unikeze ukusebenza kwe-PVC ukusebenza.
Yini i-PVC calcium ne-zinc stabilizer?
Imikhiqizo ye-PVC esetshenziselwa ukukhiqizwa kokuqiniswa okuyinhlanganisela isetshenziswa kakhulu ekuqiniseni usawoti nensimbi yensimbi, ngenxa yokusetshenziswa kwayo kwenqwaba kasawoti womthofu, okuholela ekungcolisweni kwemvelo, izinga lokushisa eliphakeme leplastikhi, ukugeleza kwesisombululo esingesihle, icala lokushabalala kwesibabule nezinye izindaba. Ikakhulukazi nabantu bemikhiqizo yepulasitiki, izidingo zemvelo ziya ngokuya zikhula, ukuthuthukiswa kwe-calcium engeyona enobuthi kanye ne-zinc eqinisayo yokuhlanganiswa kwabantu abaningi. I-calcium non-toxic compound stabilizer yi-calcium ne-zinc organic usawoti, ama-phosphites, ama-polyols, ama-antioxidants nama-solvents nezinye izinto eziyinkimbinkimbi. Ukuqiniswa kwe-calcium ne-zinc kanye ne-resin ne-plasticizer, ukusebenza obala kuhle, akulula ukusikhipha, inani lokuncane, okulula ukulisebenzisa.
Iyini insizakalo yokwenza ngokwezifiso?
Ngokusho kwekhasimende kusuka kusampula enikeziwe, izidingo ezidingekayo, ukuhlaziya nokuhlola amasampula, ucwaningo kanye nokuthuthukiswa kwe-calcium ne-zinc stabilizer engabizi kakhulu ukuhlangabezana nezidingo zemakethe, nganoma yisiphi isikhathi ukuhlinzeka ngosizo lobuchwepheshe nezixazululo.
Ngabe amasampula anganikezwa mahhala?
Siyakwamukela uphenyo, kungaba mahhala ukunikeza amasampula 1kg inkampani yakho.
I-PVC Heat Stabilizer Ye-Flexbile, I-PVC One Pack Stabilizer, I-PVC Heat Stabilizer, PVC Izithasiselo, I-PVC Isinqinisi Esingenabuthi, Isisimamisi se-PVC,